သမိုင်းနောက်ခံဒရာမာမှာ ပါဝင်မယ့်မင်းသမီး ကင်ဆိုယောင်း - Yangon Media Group
သမိုင်းနောက်ခံဒရာမာမှာ ပါဝင်မယ့်မင်းသမီး ကင်ဆိုယောင်း
ဆိုးလ်၊ ဧပြီ ၃ – ကိုရီးယားမင်းသမီး ကင်ဆိုယောင်းသည် ဒရာမာအသစ်တစ်ခုတွင် ပါဝင် လာတော့မည် ဖြစ်သည်။
ဧပြီ ၃ရက်တွင်မင်းသမီး၏ အေဂျင်စီ နရွှအသမပ အင်တာတိန်းမန့်၏အဆိုအရ ကင်ဆိုယောင်း သည် KBS ရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့် မည့် ဒရာမာတွင်ပါဝင်မည်ဟု အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဒရာမာသည် နာမည်တူတစ်ခုကို အခြေခံထားပြီး အိမ်ထောင်မပြု ချင်ဘဲ ထူးဆန်းသည့် အမျိုးသမီးများရှိရာ အသိုက်အဝန်းသို့ အမျိုးသမီး ဟန် ဆောင်ပြီး ဝင်ရောက်ခဲ့သူ အမျိုးသား ဂျောင်နို့ဒူနှင့် အပျော်မယ် မဖြစ်ချင်သည့် လူငယ်အမျိုးသမီး ဒုန်ဒုန်ဂျူတို့အကြောင်း ဇာတ်အိမ်တည်ထားသည်။
မင်းသမီးကင်သည် အပျော်မယ်ဖြစ်ရန် လေ့ကျင့်ခံရသော ဒုန်ဒုန်ဂျူနေရာ မှ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ဒေါသထွက်လွယ်သူဖြစ်သော် လည်း သီချင်းအမြင် မရှိသူဖြစ်သည်။ သို့သော် မည်သည့်အရာကိုမဆို လက်နက် သဖွယ် အသုံးချနိုင်သူလည်းဖြစ်သည်။ စိတ်တွင်ရှိသည့် အရာများကိုလည်း ထုတ်ပြောရန် ဝန်မလေးတတ်သော်လည်း လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်း ထားသည်။
သို့သော် ¤င်း၏ဘဝထဲသို့ နို့ဒူဝင်ရောက်လာချိန် တွင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်။ ‘Mung Bean Chronicles’ ဒရာမာထုတ်လုပ်ရေးဝန်ထမ်း က ”ဒုန်ဒုန်ဂျူဟာ ကင်ဆိုယောင်းအတွက် ရေးထား တဲ့ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဇာတ်ကောင် နဲ့လည်း အပြည့်အဝလိုက်ဖက်ပါတယ်။ သူပါဝင် တာဟာ ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ခုလိုပါပဲ။ သူနဲ့အတူ တွဲဖက်ပါဝင်လာမယ့် နို့ဒူအတွက် သတင်း လေးကိုလည်း စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦး”ဟု ပြော ဆိုခဲ့သည်။ ယင်းဒရာမာကို လာမည့် စက်တင်ဘာ လတွင် ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။
Ref: soo mpi
Netflix မှ ပြသမည့် ဒုတိယမြောက် ကိုရီးယားဒရာမာ My First First Love
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော် အရေးယူခံရခြင်းသည် အဂတိလိုက်စားမှုအတွက် သတိပေးသံဖြစ်ပြီး NLD အစိုးရအနေဖြင့?
မန္တလေးမြို့တော် သန့်ရှင်းရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်၍ လူထုလှုပ်ရှားမှု စုပေါင်း အမှိုက်ကောက်ခြင်း စတ
ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံမီး ဧပြီ ၂၄ ရက် ညနေထိ မငြိမ်းသေး၊ မီးလောင်မှုမှ ထွက်ပေါ်လာသော မီးခိုးငွေ့မျာ
ပင်လုံညီလာခံတွင် ANP ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ပြောဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့၏ သဘောထား မဟု??
မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းကို အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း